Shina avo lenta 21mm Dual Action Car Orbital Random Polisher S21 mpanamboatra sy mpamatsy | Checheng
Item TSY: CHE-S21
Ny S21 farany atsipazantsika DA polisera maka ny tsara indrindra amin'ny X21 mpanao hetsika roa ary mampiditra fanavaozana ara-teknika maro. Izy io dia manome haavo haingam-pandeha 0-5300 OPM, hafainganam-pandeha haingana kokoa noho ny ankamaroan'ny mpampanonta eny an-tsena. Ny herin'ny môtô mahery 900W amin'ny alàlan'ny loko mandry indrindra. Ho fanampin'izay, nohavaozinay ny anatiny ho an'ny bearings NSK Japoney rehetra ary nohamafisinay ny tariby herinaratra mba haharetan'izy ireo maharitra ny fitsapana ny fotoana. Ny gauze vovoka sy ny lavaka fametahana rivotra no nampiana tao amin'ny vatan'ny milina mba hisorohana ny hafanana miorina. Fanaparitahana miandalana miaraka amin'ny fanaraha-maso hafainganam-pandeha sy ny fiasa malemy dia manomboka azo antoka sy mety kokoa ny miasa.
1pc 6in lovia tohana, 1pc wrench, 1pc D-tahotra, boky 1pc, borosy fanadiovana 1 pc,
Borosy karbaona 1pr, borosy 1pr + mpanasa lamba
1.Fitetezana haingana, hery fanapahana mahery vaika.
2.Equip miaraka amin'ny bearings Japon NSK rehetra ary ny lanjan'ny STEEL milina maotina vita amin'ny CNC, mahatonga azy io handanjalanja tsara sy maharitra.
3.Project switch switch, ny trigger dia afaka mifehy ny hafainganana izay mety kokoa mandritra ny fiasana.
4.Motera mahery vaika 900watt dia manala ny fahasimbana haingana kokoa.
5. gauze vovoka mba hisorohana ny vovoka amin'ny rafi-piaramanidina, izay miaro ny motera amin'ny fahavoazana.
6. rafitra haingam-pandeha tsy miova miaraka amin'ny fiasa malemy.
7.Ny kofehy vita amin'ny vita amin'ny kodiarana vita amin'ny kofehy sy mifehy, mahazo aina kokoa.
Previous: 125mm Portable 900W Random Orbital Electric Car Polisher miaraka amin'ny 15mm Throw S15
Manaraka: Professional 150mm 6inch Big Orbit 25mm Dual Action Polisher S25
Fivarotana mafana 15mm Dual Action Polisher 900W Car ...